Ngwá Ọrụ Kachasị Mma Maka Homelọ Homelọ Gị | Trivoshop
Ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere nnukwu ụlọ ọrụ dị ka Microsoft, na-ekwe ka ndị ọrụ ha rụọ ọrụ nke ọma site n'ụlọ ha. Ọ bụrụ n ’otu n’ime ha, ọ ga-abụrịrị na ị ma mkpa ọ dị inwe ebe ị raara onwe gị nye nke na-eme ka obi ruo gị ala ịrụ ọrụ gị kacha mma kwa ụbọchị. Iji mezuo nrụpụta dị mkpa na nkasi obi n'ụlọ ọrụ ụlọ gị, ị ga-enwerịrị arịa ụlọ kwesịrị ekwesị.
Mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị, attentionaa ntị na arụmọrụ ya na otu ọ ga-esi dị mma mgbe awa 8 jiri ya. Dabere n'ụdị ọrụ gị, ị ga-achọ ọ dịkarịa ala otu oche na oche. Fọdụ oche ndị ọzọ maka ndị ọbịa ga-adị mma ịnwe ma ọ bụrụ na ndị ahịa gị ekpebie ileta gị.
Buru oche maka ụlọ ụlọ gị
Ofdị ọrụ ị ga-arụ, yana akụrụngwa ịchọrọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu mgbe ị na-ahọrọ tebụl. Ndị a bụ ụfọdụ mpaghara ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-ahọpụta oche gị.
Elu nke oche gị kwesịrị ịdị ogologo na omimi ka akụrụngwa gị niile chọọ. Eleghị anya ị ga - eji naanị laptọọpụ, mana ọ bụrụ na ọrụ gị chọrọ nlele desktọọpụ abụọ ma ọ bụ ohere maka akwụkwọ anụ ahụ ị ga - ahọrọ okpokoro nwere mbara dị ukwuu.
Ga-anọ ọtụtụ oge na tebụl a, yabụ gbaa mbọ nọrọ ọdụ. Ga-enwerịrị oche dị mma, mana anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Oche ergonomic magburu onwe ya ga-ejikọ nkwonkwo gị n'akụkụ aka nri. Desfọdụ tebụl na-eji ụkwụ nwere ike ịhazi, yabụ ị nwere ike ịtọ ogo na ọnọdụ ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị niile ejighi waya zuru ezu, ị ga-eche maka otu ọ ga-esi dị mfe ịtinye ụdọ niile ị nwere. Nyochaa, ọkụ, ngwa nbipute, chaja mkpanaka, rawụta, wdg. Chọọ maka tebụl nwere ọdụ ụgbọ mmiri, yana obere oghere iji gbochie ha.
Okpokoro Offex Crank desktọọpụ na-akwụ ụgwọ nke na-enye gị ike ịchọta nguzo na-arụpụta nke ịnọdụ ala na iguzo na ogologo ụbọchị ọrụ.
Họrọ Rightlọ oche Kwesịrị Ekwesị Maka Homelọ Homelọ Gị
Mgbe ewere oche, size bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa ị kwesịrị ị na-a lee anya.
Ogologo oche ahụ nwere ike ịdị iche site na sentimita 16-21 na-enye gị ohere ịhazigharị ya dịka ogo dịịrị gị mma. Oche gị kwesịrị ịdịkarịa ala 17-20 sentimita n'obosara, na ezigbo oke maka azụ azụ bụ sentimita 12-19 n'obosara.
Tupu iburu oche maka ụlọ ọrụ ụlọ gị, gbaa mbọ hụ na emere ya site na akwa na-eku ume, nke a na-ewere dị ka nke kachasị mma.
Erlọ Ọrụ Ergonomic Na-arụ Ọrụ na Chair oche, 7-ụzọ Kemeghi
Zuru okè oche Oriọna
Tinyere ìhè nke ụbọchị, na ọkụ ọkụ na-acha ọkụ ọkụ, ezigbo oriọna desktọọpụ ga-enye gị ọkụ dị iche iche, nke na-ebelata nsogbu anya na iwe. Iche iche, ọkụ desktọọpụ nwere ike belata ihe dị iche na ihe ị na-elekwasị anya na mpaghara gbara ya gburugburu. N'ụzọ dị otú a, ị ga-elekwasị anya nke ọma na nkọwa na-enweghị isi ọwụwa. N'iji ìhè oyi maka oriọna oche gị, ị ga-enwe mmetụta na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ.
N'adịghị ọkụ ọkụ, onye na-acha odo odo nwere ike ime ka uche gị dị jụụ ma nyere gị aka ịkwadebe maka ụra mgbe ị gachara ọrụ abalị. Akọwapụtaghị njikọ dị n’etiti ụcha okpomọkụ na arụpụtaghị ihe, mana ụfọdụ ndị nwere ike họrọ ọkụ ọkụ maka ogologo oge ọrụ, dabere na ọnọdụ ha na ọrụ nke ọrụ ha.
Dainolite Ji achọ Black Desk Oriọna
Mepụta ụlọ ọrụ na-arụpụta ọrụ na-amalite site na tebụl dị mma. Okpokoro zuru oke kwesịrị itinye ohere na ebe obibi gị ma nwee akụkụ dị mkpa ịchọrọ idobe akụrụngwa gị. E wezụga tebụl, were oge na-achọ nri oche na ọkụ ị ga-enwe ahụ iru ala iji ihe karịrị 40h a izu.
Gbanyere na: ngwá ụlọ, ụlọ ọrụ
Chevron ala akara ngosi Previous isiokwu Etu ị ga-azụta ndị otu egwu kwesiri ekwesi maka gị
isiokwu na-esonụ Top 5 Summer Beauty Essentials For Your Face, Isi na ntutu Chevron ala akara ngosi